लघुकथा:पहिलो प्रेम « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ फाल्गुन शनिबार ११:३१
छोरो बिदेश गएपछि पहिलो पटक घर आउॅदै थियो। आमाले घरको सरसफाई देखि लिएर छोरालाई मनपर्ने खाने कुराको जोरजाम गरिन्।यो देखेर बुढाले भने, -“हैन ठूलेकी आमा आफ्नै छोरो त होनी त्यती धेरै भावनामा बग्नु हुँदैन।” -“बुढा किन किन मनले मान्दैन मलाई त कतिखेर देखू जस्तो भएको छ, बरु अनुमति दिनुहुन्छ भने कान्छि र म जान्छौँ नी है एयर पुटमा ?”
सहमतिमा गाउॅबाट बहिनी र आमा एयर पोर्ट सम्म लिन गए। उनीहरुले कति बेला जहाज आउॅछ भनेर आकाश तिर आँखा बिछ्याई रहे।जहाज आयो। मुल गेटको एक छेउमा आमा र बहिनी बसेका थिए। छोरो गेटबाट बाहिर के निस्कन लागेको थियो, यताबाट एउटी युवती लामो पाईला गरेर गेटमा पुगि र डार्लिङ भन्दै अंगालोमा कसी। दुबै निक्कै बेर अंगालोमा कसिए। आमा र बैनी हेरेको हेर्यै भए। एकछिन पछि त्यो युवती हाते सुटकेस डोर्याउॅदै आफ्नो बाटो लागि। छोराले भन्यो, -“ए आमा पनि आई पुग्नु भएछ कतिबेला आई पुग्नु भएको आमा ? ” -“भर्खर आउँदै छु बाबु ।” -“किन दु:ख पाउँनु पर्थ्यो म आई हाल्थे नी घर।” -“के गर्ने बाबु आमाको मन मान्दै मानेन।”-” म पनि भर्खर निस्कदै छू।” -” अनि त्यो तँ संग बोल्ने नानी को हुन् बाबु?” -“साथीकी बहिनी, साथीले सामान पठाएको थियो, बैनीको हातमा दिनू भनेर बुझाई दिएँ, हेर्नू न आमा कामै कामले केही किन्न पाईन बिन्दुलाई र हजुरलाई यतै रोजाउनु पर्ला , एक दूई दिन यतै बसेर गए हुन्न आमा?” -“हुँदैन बाबु बिरामी भएका बा बाटो हेरिरहनु भएको छ, आज भोली त बाबु हाम्रो गाउँमा पनि मोटर जान्छ भोर्लेटारमा जे खोजे पनि पाइन्छ उतै किनौला” भन्दै गाउँ तिर लागे।”
उसले बैनीलाइ पनि त्यती महत्व दिएन। सबै घर पुगे आमा भान्छा तिर लागिन्।उसले मोबाइलमा यतैको सिम राख्यो र कतै फोन गर्यो। फोन उठेन धेरै प्रयास गर्यो एकै छिनमा फोन स्विच अफ भएको पाइयो। ऊ आकुल ब्याकुल भयो। छोरो निरास भएको देखेर आमाले सोधिन्,-” हैन बाबु अनुहार मलिन देख्छु के भयो तँलाई?” ऊ धेरै दुखी बन्दै भन्यो, -“आमा मैले कसैलाई प्रेम गर्छु तर सम्पर्क गर्न सकिन।” आमाले भनिन्,-” आज भोली जमाना ठिक छैन बाबु पहिल्यै आफै तर्किछ राम्रै भयो, मैले तेरो लागि एउटा सुशिल केटी मनले खामेर राखेकी छु, उसले पनि तेरो बारेमा चासो राखिरहन्छे।”-” त्यसो नभन्नु आमा ! झरना मेरो पहिलो प्रेम हो म उसलाई कसरी बिर्सन सक्छु र?” आमाले भनिन्,-” बाबु तँ आज सम्म भ्रममा बाँचिरहेको रहेछस् ,मेरो आखामा एकपटक आखा जुधाएर भन्न सक्छस् , पहिलो प्रेम कोहो भनेर?”
सर्वोच्चको आदेश विपरीत पशुपति क्षेत्रमा इसाईका पक्की चिहान !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा इसाइ
विवाद पर्दा धर्म सम्झौं
डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । विवादे धर्ममनुस्मरेत् (चासू–४७०) वादविवाद वा झगडाका वखतमा धर्म सम्झनु
हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो होः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा हिन्दू धर्ममाथि बाह्य दबाब, प्रभाव, प्रलोभन र
कोभिड खोप पूरा विश्वभरि कहिलेसम्म पुग्ला ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले खोपले महामारीको ज्वारभाटालाई मोड्न ठूलो आशा